Ngesikhathi ukuphakama ehlobo, abaningi sebeqala ziyahlakazeka zingene zokulala. Ngakho-ke, umbuzo yini ifomu nephephile yokuhamba, kwaqala ukuvela abantu abaningi. Isizathu sokuba nomuzwa wokuphuthuma sasiwukuthi kwakukuningi ezihlukahlukene enkulu izingozi ezenzeke eminyakeni yamuva kokubili emoyeni kanye emhlabathini.
Ababethukile ingasakwazi ukukholelwa ukuphepha ukuthembeka izimoto futhi aqale nini ukuchitha amahora ku-inthanethi in search of impendulo yombuzo - kufanele nenze ukudluliselwa noma izindiza lapho ezokuthutha? Uma lokhu kucatshangelwe yonke: izimfanelo izimoto, degree of ukuwohloka kwabo nokwethembeka.
Kodwa akufanele kube enemininingwane kakhulu ukuya ngokuthi siyayiqonda le ndaba, futhi kungcono ukuzama ukuthola bona ifomu nephephile zokuthutha. Eminyakeni yamuva, abantu behlakaniphile ikakhulukazi bathi ngokushesha izindlela nephephile yokuhamba kuyoba nezinqola zamahhashi okuthiwa ama, ngoba Ihhashi ngezinye izikhathi ngobuchule kuka nomuntu ophatha ke. Ukulandela lesi nikhuluma elula okunengqondo, ongaqeda ngisho isici womuntu.
Ngakho, kufanele sinake inkinga ngokuthi "ifomu nephephile wezokuThutha." Izibalo ayikashintshi kakhulu eminyakeni embalwa edlule. Ngakho-ke, singasho ngokuphepha ukuthi endaweni yokuqala, ngokuvumelana abantu okwaxoxwa nabo, abangamaphesenti wathatha wesitimela. Endaweni lokugcina zezindiza. Mayelana 70 amaphesenti alabo okwaxoxwa nabo bathi babe esivuna izitimela isitimela. Cishe 84 per cent bavumelana ukuthi izindlela eziyingozi kakhulu yezokuthutha kukhona nje izindiza.
ukuhlolwa zempikiswano ku isilinganiso "Ifomu nephephile yokuhamba," wathola imoto amanzi. Imibono ngezingozi zokuhamba enjalo uhlukanise cishe ngesigamu.
Kodwa umholi ongenambangi izimoto ezithwala ukuphi. Amasevisi ezihlukahlukene brand kanye amamodeli we izimoto esetshenziswa mayelana 82 per cent zabantu emhlabeni wonke. Ngaphezu kwalokho, iningi abaphendulayo - kaningi kakhulu. Cishe u-64 amaphesenti abantu bakhetha ukuhamba ngesitimela. Kunabo bonke abakhileyo eMhlabeni uyawuthanda zezindiza namanzi ezokuthutha - amaphesenti ayishumi nanhlanu kuphela.
Kodwa konke okwakuthiwe kushiwo ngenhla, libhekisela luyingxenye umbono wabantu. Nokho, inhlolovo ezimele liye lachazwa ehluke ngokuphelele kuyinto ifomu nephephile zokuthutha. Sikhuluma zezindiza. Kuyinto izindlela zokuhamba iyona enokwethenjelwa kakhulu futhi evikelekile. Ngemva emoyeni kule simo kukhona amanzi wesitimela izindlela. Kodwa izimoto kukhona, kunalokho, indlela eziyingozi kakhulu zokuhamba.
Kodwa uma sithatha njengoba ngesisekelo ibanga ezimboziwe, ifomu nephephile zokuthutha - isikhala izikebhe namathuluzi. ezintathu kuphela apharathasi enjalo liphahlazeka emlandweni wesintu. Ngaphezu kwalokho, naphezu kwezindleko nomsebenzi omkhulu isikhala ezokuvakasha, kuba zithandwa kakhulu futhi zitholakala isivele sisikhulu.
Motoblock "Cascade": incazelo, intengo kanye Ukucaciswa
Indlela ukukhetha photographer wedding? imiyalelo iDemo
Toxocara - ukwelashwa kanye nezimpawu